搜索 Abbhokāsa 的结果：
abbhokāsa：m. [abhi-avakāsa. cf. ajjhokāsa] 露地，野天，屋外，野外.
Abbhokāsa，【阳】 无庇护的地方，户外，露天。 ~kāsika，【阳】 住在户外的人。（p31）
Abbhokāsa，（abhi全面﹑超越+avakāsa机会﹑空间），【阳】户外，露天，无庇护的地方，海阔天空，全都露。abbhokāsika，【阳】住在户外的人。abbhokāsova pabbajja（PTS：abbhokāso ca pabbajja），出家是海阔天空。SnA.v.406./II，381.︰Abbhokāsoti vuttasambādhapaṭipakkhabhāvena ākāso viya vivaṭā.（海阔天空︰如所说的龌龊，对治消失之后，露出空间。）
[abhi+okāsa. rū.24-.（abhyavakāga-saṃ）. abbha+okāsa，udāna，ṭṭha.221- suttani，ṭṭha，2.111-，visuddhi，sya，1.174-. （abhrāvakāga-saṃ）]
[အဘိ+ဩကာသ။ ရူ။၂၄-ကြည့်။（အဘျဝကာဂ-သံ）။ အဗ္ဘ+ဩကာသ၊ ဥဒါန၊ဋ္ဌ။၂၂၁-နှင့် သုတ္တနိ၊ဋ္ဌ၊၂။၁၁၁-တို့ကြည့်၊ ဝိသုဒ္ဓိ၊သျ၊၁။၁၇၄-လည်းကြည့်။ （အဘြာဝကာဂ-သံ）]
abbhokāsa：[m.] unsheltered place； open air.
Abbhokāsa，[abhi + avakāsa] the open air，an open & unsheltered space D.I，63 （= alagganatthena a. viya DA.I，180），71 （=acchanna DA.I，210），89； M.III，132； A.II，210； III，92； IV，437，V，65； Sn.p. 139 （°e nissinna sitting in the open） J.I，29，215； Pug.57. （Page 61）
ABBHOKĀSA：[m] chỗ không có che lợp，ngoài trời --kāsika [m] người ở ngoài trời
abbhokāsa：chỗ ở trống trải，chỗ hoang sơ
（၁） လွင်တီးခေါင်၊ လွင်ပြင်၊ ဟင်းလင်းပြင်၊ လဟာပြင်၊ ကောင်းကင်၊ အမိုးအကာမရှိသော နေရာ။ （၂） လွင်တီးခေါင်-လွင်ပြင်-ဟင်းလင်းပြင်-လဟာပြင်-ကောင်းကင်-တည်းဟူသော-နှင့် တူသော။ （ရဟန်းအဖြစ်）။ （၃） လွင်တီးခေါင်-လွင်ပြင်-ဟင်းလင်းပြင်-လဟာပြင်-ကောင်းကင်-၌ နေခြင်း။ အဗ္ဘောကာသိက-ကြည့်။
အဗ္ဘောကာသော ပဗ္ဗဇ္ဇာ၊ ရဟန်းအဖြစ်သည် လွင်တီးခေါင်နှင့်တူ၏။
与 Abbhokāsa 相似的巴利词：